UGloria Fuertes: imibongo | Uncwadi lweNdaba
UGloria Fuertes: imibongo
Encarni Arcoya | | Imibongo
Umthombo wefoto kaGloria Fuertes: Imibongo-Facebook Gloria Fuertes
Alithandabuzeki elokuba uGloria Fuertes ngomnye wababhali abaziwayo emhlabeni. Imibongo yakhe phantse isoloko ikhunjulwa kuba sikhule nayo. Kodwa inyaniso kukuba wayengaphezu kokuba yimbongi yabantwana. Zombini umfanekiso owomeleleyo weGloria kunye nemibongo yakhe iyanyamezela ngokuhamba kwexesha.
Kodwa, Wayengubani uGloria Fuertes? Yeyiphi imibongo eyona ibalulekileyo oyibhalileyo? Ibinjani?
1.1 Imbali yobuqu
2 Eyona mibongo igqwesileyo kaGloria Fuertes
2.1 Xa bekubiza ngamagama
2.2 Uyabona obububhanxa
2.4 Vuka Umqhagi
2.5 Kwigadi yam
2.6 Qikelela, qikelela...
2.8 Uya phi, mchweli? (CAROL)
2.11 Inkamela encinci
2.12 Kubuso bam obungqukuva
2.13 Iesile ndini!
Ngamazwi kaCamilo José Cela, UGloria Fuertes 'wayeyingelosi ebhityileyo' (uxolo). Akazange aphile ubomi obulula, nangona kunjalo, wakwazi ukubhala eminye yemibongo emihle yabantwana.
UGloria Fuertes wazalelwa eMadrid ngo-1917. Wakhulela kwindawo yaseLavapiés, esifubeni sentsapho ethobekileyo (umama we-seamstress kunye noyise we-porter). Ubuntwana bakhe wachitha phakathi kwezikolo ezahlukeneyo, ezinye zazo ebalisa kwimibongo yakhe.
Xa wayeneminyaka eyi-14, unina wambhalisa kwi-Institute of Professional Education for Women, apho wafumana iidiploma ezimbini: Shorthand kunye neTyping; kunye naleyo yoCoceko nokuKhathalelwa kwaBantwana. Noko ke, kunokuba aye emsebenzini, wagqiba kwelokuba abhalise kwiGrammar noLincwadi.
Injongo yakho, kunye into awayesoloko efuna ukuba yiyo, wayengumbhali. Kwaye waphumelela ngo-1932, eneminyaka eyi-14, xa bapapasha omnye wemibongo yakhe yokuqala, "Ubuntwana, Ulutsha, Ubudala ...".
Umsebenzi wokuqala awayenawo yayikukuba ngumgcini-mali kumzi-mveliso, nto leyo eyamnika ixesha lokubhala imibongo. Kwakungowe-1935 awathi wapapasha ingqokelela yazo, Isiqithi esingahoywanga, kwaye waqala ukunika iirecitals zemibongo kwiRadio Madrid. Noko ke, akazange awuyeke umsebenzi wakhe. Ukususela ngowe-1938 ukuya kutsho ngowe-1958 wasebenza njengonobhala de wakwazi ukuyeka. Kwaye kukuba ukongeza kulo msebenzi waba nomnye njengomhleli kwimagazini yabantwana. Olo hlobo lomculo lulo olwakwaziyo ukuvula iingcango zodumo, olwafika kuye ngo-1970 xa. Umabonwakude waseSpain wambonisa kwiinkqubo zabantwana kunye nolutsha kwaye wenza imibongo yakhe yaziwe kwihlabathi jikelele.
Okokugqibela, kwaye ngenxa yokuba ingomnye wemibongo apho yena ngokwakhe ethetha ngobomi bakhe, sikushiya ngendlela aziveze ngayo.
kwiintsuku ezimbini ubudala,
Ewe, ukubeleka kukamama kwakunzima kakhulu
ukuba xa ithe yatyeshelwa, ifa ukuze iphile ngenxa yam.
Xa wayeneminyaka emithathu wayesele ekwazi ukufunda
Ndandisele ndiwazi umsebenzi wam ngentsimbi yesithandathu.
Ndandilungile kwaye ndibhityile
uphezulu kwaye uyagula.
Ndineminyaka elithoba ndabhaqwa yimoto
Ngeshumi elinesine landibamba imfazwe;
Ngeshumi elinesihlanu umama wam wasweleka, wahamba ngexesha endandimdinga ngalo kakhulu.
Ndafunda ukuthengisa ezivenkileni
nokuya ezidolophini ukuya kufuna iminqathe.
Ngelo xesha ndaqala ngothando,
ngenxa yoko, ndakwazi ukunyamezela
Ndandifuna ukuya emfazweni, ukuyiyeka,
Kodwa bandimisa phakathi
Emva koko kwaphuma iofisi isiza kum,
apho ndisebenza khona ngathi ndisisidenge,
"Kodwa uThixo kunye ne-bellhop bayazi ukuba andinguye."
kwaye ndiya endle kakhulu.
Bonke abam baneminyaka befile
kwaye ndindedwa kunam.
Ndithumele iivesi kuzo zonke iikhalenda,
Ndibhala kwiphephandaba labantwana,
kwaye ndifuna ukuthenga intyatyambo yendalo ngezavenge
njengazo banike uPemán ngamanye amaxesha.
Eyona mibongo igqwesileyo kaGloria Fuertes
Apha ngezantsi siqulunqile eminye yemibongo kaGloria Fuertes ukuze, ukuba awuzazi, unokubona ukuba wabhala njani. Kwaye, ukuba uyazazi, ngoko ngokuqinisekileyo uyafuna ukuzifunda kwakhona kuba zezona zibalaseleyo kwimibongo.
Xa bekubiza ngamagama
Xa besithi ngawe,
bayaliba intwana yegama lakho kum;
kubonakala ngathi bubuxoki,
ukuba isiqingatha seshumi elinesibini iileta zithetha kakhulu.
Ubudenge bam boba kukudiliza iindonga ngegama lakho;
Bendiya kupeyinta zonke iindonga,
bekungayi kubakho qula
ngaphandle kwam ukubonisa
ukulibiza igama lakho,
okanye intaba yamatye
apho andiyi kukhwaza
iileta zakho ezintandathu ezahlukeneyo.
Ukuphambana kwam kuya kuba,
zifundiseni iintaka ukucula;
zifundise iintlanzi ukuba zisele.
fundisa abantu ukuba akukho nto,
njengokuphambana nokuphinda igama lakho.
Impambano yam iya kuba kukulibala yonke into,
koonobumba abangama-22 abaseleyo, bamanani,
yeencwadi ezifundiweyo, zeevesi ezidaliweyo. Ndibulise ngegama lakho.
Cela isonka esinegama lakho kuso.
- Uhlala ethetha into efanayo - baya kuthi kwisinyathelo sam, kwaye mna, ndiyazingca, ndonwabile, ndonwabile.
Kwaye ndiya kwelinye ilizwe negama lakho emlonyeni wam,
kuyo yonke imibuzo ndiya kuphendula igama lakho
abagwebi nabangcwele abayi kuqonda nto;
UThixo uya kundigweba ukuba ndithethe njalo ngonaphakade.
Uyayibona into engekhoyo,
Ndiyathanda ukubhala igama lakho
Xelela abantwana igama lakho,
bhalela ubawo ofileyo
kwaye umxelele ukuba igama lakho linjalo.
Ndiyakholwa ukuba nanini na ndithetha, uyandiva.
Ndicinga ukuba lithamsanqa.
Ndihamba ezitratweni ndonwabile
kwaye andiphethe nto ngaphandle kwegama lakho.
Ndazalwa ndimncinci kakhulu.
Ndayeka ukungakwazi ukufunda ndineminyaka emithathu ubudala,
intombi, ishumi elinesibhozo;
umfeli-nkolo, kumashumi amahlanu.
Ndafunda ukukhwela ibhayisekile,
xa bengafikanga kum
ukuncamisa, xa bengafikanga kum
Kungekudala ndafikelela ekuqoleni.
Imbali eNgcwele kunye nesiBhengezo.]
IAlgebra noDade Maripili babengandifanelanga.
Ndazalwa ngaphandle kwe peseta. Ngoku,
ukuba ilanga sele likhona
ndilinde wena "esikolweni".
Idolophu ayifuni iwotshi
umqhagi ixabisa alarm.
Engcani imithi ithetha nam
wombongo wobuthixo othi cwaka.
Ubusuku bundothusa ndingancumi,
zivuselela inkumbulo emphefumlweni wam.
Licala likabani? Ngubani owatshoyo?
I kiss ebendizilindile undishiyile
Kwiphiko legolide leenwele zam
Sukuhamba! Khanyisa iintyatyambo zam!
Kwaye ndiyazi, wena, sihlobo somoya isithunywa;
mphendule uthi undibonile.
ngencwadi eqhelekileyo phakathi kweminwe yakho.
Xa uhamba, khanyisa iinkwenkwezi,
baluthabathile ukhanyiso, ndingaboni kakuhle;
Ndiyazi ke, moya ugulayo umphefumlo wam;
kwaye uthathe lo "mhla" kuye ngenqwelomoya ekhawulezayo.
... Kwaye umoya undiphulula kamnandi,
kwaye ishiya ukungakhathali kumnqweno wam ...
mfutshane, utyebile kwaye unesisu,
uyawazi amazwi, ulumkile.
Ngubani yena? (Sancho Panza)
Ukuba usemhlabeni, Bawo wethu,
Ukuba ndiziva ukwispike yepine,
Kwi-torso eluhlaza okwesibhakabhaka yomsebenzi,
Kwintombazana ephotha igophe
Umva, ukuxuba intambo emnweni.
Bawo wethu osemhlabeni,
Apho unozuko lwakho nesihogo sakho
Kwaye i-limbo yakho; ukuba use cafes
Apho izityebi zisela isoda yazo.
Kwisihlalo sokufunda ePrado.
Nguwe laa xhego linika iintaka iimvuthuluka zesonka;
Kubo bonke abalungileyo.
Utata ohlala naphi na,
UThixo ongena kuwo nawuphi na umngxuma,
Wena ususa umvandedwa osehlabathini;
Bawo wethu siyakubona
Ezo kufuneka sizibone kamva,
Naphi na, okanye phaya esibhakabhakeni.
Uya phi, mchweli? (CAROL)
Ndiya kukha iinkuni ezintabeni
Ndiya kukha iinkuni ezintabeni;
-Ndiya kusindisa wonke umntu
Ndifike ubunzima bekhilogram ezingamashumi amane.
Bendikwicala lesifo sephepha
kwaye, kancinci kancinci, yandozela,
nanko ndilele emphethweni.
Inyosi nganye kunye neqabane layo.
Idada ngalinye linethupha lalo.
Umntu ngamnye ngowakhe umxholo.
Umqulu ngamnye kunye nekhava yawo.
Umntu ngamnye une type yakhe.
Umntu ngamnye ubetha impempe ngempempe yakhe.
Nganye igxininise kunye netywina layo.
Ipleyiti nganye nekomityi yayo.
Umlambo ngamnye nechweba lawo.
Ikati nganye nekati yayo.
Imvula nganye inelifu layo.
Ilifu ngalinye linamanzi alo.
Inkwenkwe nganye nentombazana yayo.
Iphayinaphu ngalinye kunye nephayinaphu lalo.
Ubusuku ngabunye nokusa kwayo.
kunye nomkhandi uMelchor
waya kugalela amafutha
ngaphaya kwepine yesihlanu ...
kwaye uMelkiyore omkhulu wayengonwabanga
wabonisana ne "Longinus" yakhe.
kwaye ukuZala okuNgcwele kufikile!
-yimizuzu emithathu emva kwentsimbi yeshumi elinambini
kwalahleka ookumkani abathathu.
bangaphezulu kwesiqingatha sokufa kunabaphilayo
inyakanyaka yayo entle
phakathi kweziqu zemithi yomnquma.
UMelchior wasebeza endlebeni yakhe:
-Good inkamela birria
ukuba eMpuma bakuthengisile.
Yhoo usizi olungaka
kwi-belfo yakhe nakuhlobo lwakhe!
I-Baltasar ithwala izifuba,
UMelchior wayetyhala ibug.
Kwaye sele kusile
-iintaka zazisele zicula-
bahlala ookumkani abathathu
umlomo uvule kwaye ungenzi sigqibo,
ukuva ukuthetha njengendoda
kumntwana osandul’ ukuzalwa.
Andifuni golide nesiqhumiso
okanye obo butyebi bubanda kangako,
Ndiyayithanda inkamela, ndiyamthanda.
Ndiyamthanda, -uMntwana waphinda.
Bayabuya ookumkani abathathu ngeenyawo
uwile kwaye uxhwalekile.
Yalala phantsi inkamela
Kubuso bam obungqukuva
kunye nomlomo omncinci
Ngamehlo am ndibona yonke into
ngempumlo yam ndenza iintlungu,
ngomlomo wam ngathi njani
Idonki ayisoze iyeke ukuba yidonki.
Kaloku idonki ayisayi esikolweni.
Idonki ayisoze ibe lihashe.
Idonki ayisoze iphumelele imidyarho.
Yintoni ingxaki yedonki ngokuba yidonki?
Kwidolophu yeedonki akukho sikolo.
Idonki ichitha ubomi bayo isebenza;
ngaphandle kwentlungu okanye uzuko,
ibotshelelwe kwivili le-ferris.
Idonki ayikwazi ukufunda.
Idonki ifika ekugqibeleni entanjeni;
Kodwa iimbongi ziyamculela!
Idonki ilala kwindlu eseyile.
Musa ukubiza iesile ngokuba lidonki;
Mbize ngokuba "ngumncedi womntu"
okanye umbize umntu
Ngaba uyayazi imibongo emininzi efanele ukukhunjulwa nguGloria Fuertes?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Imibongo » UGloria Fuertes: imibongo
Ukukhethwa kwezinto ezintsha ngoJanuwari
UChristina Rossetti. Isikhumbuzo sokufa kwakhe. Imibongo